IFP Archives - Gagasi World
I-IFP ithi likhathazekile ngokwanda kwezigameko zokutholakala kwezingane ezisuke zilahlwe
I-IFP kulesfundazwe ithi likhathazekile ngokwanda kwezigameko zokutholakala kwezingane ezisuke zisanda kuzalwa zilahlwe emigqonyeni nasemihosheni. Ukuphawula kwe IFP kulandela isigameko sokutholakala kosana obelusanda kuzalwa selushonile lugoqiswe okwephasela lalahlwa estamkokweni ilanga lishisa likhipha umkhovu etsheni. Okhulumela i-IFP kweziphathelene nezenhlalakahle esishayemthetho, uLes Govender, uthi ziningi izindlela ezikhona ezingasetshenziswa njengokunikela ngaye umntwana uma umuntu engamfuni. Listen here: Content hosted […]
i-IFP women’s brigade ithi amajoyinti kumele abe nesikhathi sokuvalwa
By: Mthokozisi Manqele Uphiko lwabesfazane lwe IFP eJozini enyakatho yesfundazwe, seluphonsele umnyango wezokuphepha inselelo ukuthi uthathe isinqumo sokuthi kuvalwe zonke izindawo ezisemphakathini ezidayisa utshwala kuze kuse. Loluphiko luthi lezindawo zigcina seziyizidleke zabadlwenguli. uSihlalo weWomen’s brigade, uNobuhle Jobe, usho kanje njengoba kade benemashi yokukhuza isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane eJozini. UJobe uthi leyandawo ingezinye zezindawo zakulesfundazwe ezinezigameko […]
By: Lethiwe Mdluli Only 16.6 % of the over 1500 voting districts in the country have completely finished counting so far, and over 2 million votes have been counted so far. Results have been trickling in overnight, and current data shows that the ANC is enjoying an early lead nationally. The IEC’s latest update shows […]
Abezombusazwe bayashabasheka bafuna amavoti
By: Zilungile Mkhize Njengoba sekusele izinsuku ezingu 22 kuphela kuyiwe okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe, sekucace bha ukuthi alikho iqembu elizithele ngabandayo. I-ANC ibithe chithisaka eWestern Cape, eGauteng nase Eastern Cape, lapho abaholi bayo bebekhankasa khona. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa uthi udaba lwezindlu lubaluleke kakhulu kubo. Content hosted by iono.fm Kanti umholi weNkatha Freedom Party, uMtwana uMangosuthu […]
IFP voices concern about a DA sms’s
By: Lindelani Mbatha Inkatha Freedom Party Campaigns Committee Chairperson, Narend Singh, says they are concerned about the massage allegedly being circulated by the DA, instructing voters not to vote for smaller parties in the province. Singh has been briefing media on the IFPs state of readiness ahead of the May 8 polls, at the party’s […]